Free DFM Check - Shenzhen Anoshamisa Technology Co., Ltd
Somunhu ukoshi-akawedzera Ipfungwa mabasa edu Assembly, tinopa Free pcb File Check, aizivikanwawo Free DFM, kureva tinobatsira ongororazvaunoisa tsika redunhu pepuranga magadzirirwo faira nokuda zvichibvira nyaya zvingavhiringidza manufacturability. Kana nyaya dzakanga dzakaonekwa, taizongowana pakarepo nekuonana kugadzirisa nyaya pamwe chete, zvino kuronga pcb kugadzirwa maererano.
The DFM chichaitwa kubva 5 zvinhu: Drill macheki, Signal uye Mixed rukoko macheki, Power / Ground macheki, Solder Mask macheki, Silkscreen macheki. Verenga kuburikidza zvinotevera ndima mamwe mashoko.
1. Drill macheki
The Drill macheki zvinoitwa chinangwa kuwana zvinogona manufacturability kuremara mu chibooreso akaturikidzana (kuburikidza, akavigwa uye bofu inotumirwa akaturikidzana) uye tanga Nhamba iri boora akaturikidzana. Mwari akaronga kuti unoshanda chete boora akaturikidzana. Inoshandisa chibooreso layer kumusoro uye pasi akaturikidzana kwayo chibooreso wemagazini uye chero simba kana pasi rukoko ari wemagazini. Huru kuongorora unoratidzwa mune zvinotevera Table 1.
2. Signal uye Mixed rukoko macheki
basa iri kuitirwa kuti kuwana mukana manufacturability kuremara muna Signal akaturikidzana uye vakavhengana akaturikidzana uye tanga nhamba. The chiito anogona kushanda musi upi layer asi dzinowanzotsigi- arongera chiratidzo akaturikidzana. Inoshandisa rukoko pacharo uye chero NC (drill kana nzira) rukoko iyo rukamubaya. Huru kuongorora unoratidzwa mune zvinotevera Table 2.
3. Simba / Ground macheki
The Power / Ground macheki inoitirwa kuwana zvinogona manufacturability kuremara musimba, pasi uye vakavhengana akaturikidzana. Inoshandisa algorithms zvakasiyana rokuongorora akaipa uye zvakanaka simba uye pasi akaturikidzana. Huru kuongorora unoratidzwa mune zvinotevera Table 3.
5. Silkscreen macheki
basa iri kuitirwa kuti kuwana mukana kugadzira kuremara mu silkscreen akaturikidzana uye tanga nhamba. The cheki unoshanda chete esiriki chidzitiro akaturikidzana nokuti rinovimba kubasa chizvaro kuwana anoenderana mhangura zvokunze, solder Mask uye chibooreso akaturikidzana mhosva kuti aone. Huru kuongorora unoratidzwa mune zvinotevera Table 5.
Wanna kutora mukana wedu Free DFM nezvechisarudzo? Tanga pakutumira mazwi kukumbira tsika yenyu pcb chirongwa Assembly kuti wonderful@wonderfulpcb.com Ivai nechokwadi iwe zvinosanganisira rako pcb kugadzirwa faira, BOM uye zvimwe zvinodiwa. Vamiririri vedu kuongorora faira yako uye kupa tsika mashoko mukati 1-2 kushanda mazuva.